China Rubber kupfeka bvudzi bhurasho nemavara ekudhinda neyakadhiza dhiza fekitori uye vagadziri Yongsheng
Rubha kupfeka bvudzi bhurasho nemavara ekudhinda neyekugadzira mubato
Zvinhu: ABS, rubber, nylon, bristles.
Ruvara: Dema, Pepuru, Pingi, Bhuruu, Yero, Goridhe.
Pre-kugadzirwa ------ sampuro ------ simbiso-Chinyorwa ------ kutenga-Chikamu ---- chikamu ------ Jekiseni-Hunhu ------ kuongorora-Chikamu ------ chikamu ------ chepamusoro ------ kupedzisa-Hunhu ------ kuongorora-Gungano-Hunhu ------ kuongorora-kurongedza.
Paddle bvudzi bhurasho, rakasiyana chimiro cushion bvudzi bhurasho, rakatenderedza bvudzi bhurasho, vent vhudzi bhurasho. Aluminium dhiramu bvudzi bhurasho zvese zvinogona kuwanikwa. Bvudzi bhurasho nemabhora-akapetwa bristles, iwo anodonhedza brushes akapfava pane yeganda uye haazodhonza vhudzi. Zvinoreva kuti urikutumira mameseji eganda kana uchikwesha izvo zvinowedzera kutenderera, nekudaro zvichibatsira kusimudzira bvudzi. Bvudzi bhurasho reVarume neVakadzi, Huru pane Wet kana Dry Bvudzi, Rakareba Rakaonda Mutete Rakarukwa Natural Bvudzi uye ese marudzi ebvudzi.
Mubato wakasiyana dhizaini dhizaini. Yakagadzirwa isina-kutedzemerwa yakagadzirirwa, kubata kwakasununguka uye kwete nyore kudonha. Bata pasi ine gomba, zviri nyore kuti urembedze. Iyo yekuvandudza, ergonomic isiri-slip mubato wakagadzirirwa zvakanyanya kuti ikupe iwe zvakanyanya kutonga uye kunyaradza nepo dhizaini. Zviri nyore kuti uwane mibairo yehunyanzvi salon kumba nemabhurashi aya ebvudzi. Unogona kusarudza chero waunoda wekubata. Dzimwe dzadzo dzinogona kuve dzakabata zvishoma, dzimwe dzadzo dzinogona kuve nemavara dhizaini, zvakare iwe unogona kupurinda logo yako panzvimbo yeplate. Iyo ndiro inogona kuve yakasiyana ruvara uye maitiro sekubata, semuenzaniso, iwe unogona kupenda ruvara pahwendefa uye yerabha kupfeka pabrashi. Uye mapinibhora anogona kunge akaenzana ruvara nendiro seyimwe yakateedzana.
Pashure: UV yemagetsi, yekuchinjisa mvura, inopenya yekudhinda bvudzi bhurashi neakagadzirirwa mubato
Zvadaro: MutengoList yeChina Yakasarudzika Nyanzvi Yechinyakare Yakasviba Makeup Brushes Set Kumeso Ziso Blush Brushes
Ceramic Bvudzi Brashi
Yakakomberedzwa Bvudzi Bvudzi
Bvudzi Brush Rubber Bristle
Mini Bvudzi Brush
Mini Wood Wood Bvudzi Brush
Nylon Pini Bvudzi Brush
UV emagetsi, mvura yekuchinjisa, shinning kudhinda h ...